Igbo, John: Lesson 050 - Echiche di iche iche banyere Jisos n'etiti ndi mmadu na ndi isi ochichi (Jọn 7:14-53) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 050 (Disparate views on Jesus)
21 Jisus zara ha, si, Mu onwem amawo otù ọlu, o we ju unu nile anya n'ihi ya. Moses enyewo unu úgwù (ọ bughi na Moses, kama nke ndi bu nna), ma n'ubọchi-izu-ike ka unu nēbì nwa-úgwù. 23 Ọ buru na ebì madu úgwù n'ubọchi-izu-ike, ka ewe ghara imebi iwu Moses, ọ bu iwe megidem ka M'mere ka aru madu di ike n'ubọchi-izu-ike? 24 Unu ekpela ikpe dika ikpé, kama kpeenu ikpé ziri ezi.
Jizos azaghachighi nzaghachi nke ndi Ju na o nwere mo ojo ojoo, ma o gosiputara ndi mmadu ka ha gbakoro na ikpe ahu enyere ya n'onwu bu ihe nadigh nma ma obu ikpe na-ezighi ezi. O chetaara ha na ndị isi 'na-ekpe ikpe megide ya bụ n'ihi ịgwọ ọrịa ahụ na Bethesda n'ụbọchị izu ike. N'ụbọchị ahụ Jizọs nyere ya iwu ka ọ buru ihe ndina ya ma laa n'ụlọ eweghachi. Nke a bụ oké ihe ijuanya na ọrụ ebube ahụ kwesịrị ịchụpụ ụgwọ ahụ a na-ebo ya.
Mgbe ahụ Jizos kwusiri ike na ndị ọkachamara gbasara iwu anaghị edebe iwu ahụ n'ụzọ zuru oke. Iwu a nwere ihe megidere ya: Ibi úgwù bụ ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ ahụ na Chineke, ebe Sabbath na-ekwu banyere mkpakọrịta n'etiti ndị nsọ. Ndị mmadụ ga-ebiri ụmụ ha úgwù n'ụbọchị asatọ mgbe ha mụsịrị nwa, mana nke a nwere ike ịda na Sabbath. Ọ bụ na ibi úgwù abụghị ọrụ?
Ebe ọ bụ na a na-ele ọrịa anya dịka mmehie, ngwọta bụ nzọpụta, ahụ, mkpụrụ obi na mmụọ. Ya mere Jizos gbara ndi mmadu ume ka ha jiri uche ha mara, ka ha we mara uzo ebere nke ibibi na Sabbath, nke di nkpa? O si otú a jiri ogbagha mee ihe iji kpalie ha ka ha mata oke ima na ikike na nzoputa ya. Mgbalị ahụ bụ n'efu; ntị ha ka ntị chiri, ndị mmụọ ha jikwa obi ike - mkpebi ziri ezi na ikpe ziri ezi agaghị ekwe ha omume.
25 Ya mere ufọdu nime ndi Jerusalem siri, Ọ bughi Onye a ka ha nāchọ ib͕u? 26 Lee, ọ na-ekwu okwu n'ihu ọha, ha adịghịkwa agwa ya ihe ọ bụla. Ọ gābu na ndi-isi mara n'ezie na nka bu Kraist ahu? 27 Ma ayi matara ebe nwoke a si bia; ma mb͕e Kraist-ayi gābia, ọ dighi onye ọ bula mara ebe o si puta.
Ndị Jerusalem na-abịa n'ụlọ nsọ iji chọta ìgwè mmadụ buru ibu. Mgbe ha hụrụ Jisos n'etiti ha, ha na-ewe iwe, n'ihi na ọ ka na-agagharị n'enweghị ihe ọ bụla n'agbanyeghị iwu maka ijide ya. Akụkọ ahụ bụ ihe ọmụma zuru ụwa ọnụ.
Ụmụ amaala nke obodo obodo ahụ mere mkpesa na Council maka njedebe ikpe ahụ. Romanians abolished the right to abolish death from the Jewish authorities. Ndị mmadụ na-akwa emo na-asị, "Nwoke ahụ chọrọ ka ọ na-agagharị n'obodo ahụ, na-ekwusa ozi ọma n'ụlọikpe ụlọikpe, ndị ọchịchị enweghị ike igbochi ya." Ndị nchụàjà enweghị ike iji okwu na arụmụka mee ka ọ daa."
Ndị ọzọ zara, "Ị ghọtaghị, ụfọdụ n'ime ndị ọchịchị nwere ike ikwere na ya dịka Mesaịa." Nke a bụ isi ihe mere ka ha kọwaara ha ịghara ijide Jizọs. E kewara ndị mmadụ niile n'ihu ọha.
Echiche nke atọ: Ọ bụrụ na a ga-abịa na Mesaya ahụ, ọ ga-egbukepụ n'ụdị dị omimi dị ebube, ọ bụghị onye nkịtị. Nwa okorobịa a bụ ọkwá nkà si n'obodo nta ahụ. Ezigbo Mesaịa ahụ ga-esi n'eluigwe bịa kpọmkwem, ọ bụghị ịgagharị n'etiti ndị nkịtị.
Jizos ama okop mme utọ emi ke ini enye ọkọtọn̄ọde ke isọn̄. O wee kwuo, sị, "Ị maara m n'ezie maọbụ ebe m si bịa? Ị na-ama m ikpe n'ekpe gị, ị maghị m, gee m ntị, gbanye m n'ime mmụọ m, mgbe ahụ ị ga-ama onye m bụ na ebe M si."
Jizọs ezughị onwe ya, ma Chineke nọ n'azụ ya onye ọ malitere; Ọ bụ Nna ya zitere ya. Jizos sitere n'udi nke Nna ya ma buru ya na Ya. Ọ dighi onye ọ bula nime unu mara Chineke, ma unu onwe-unu nēchè na Ọ nọ n'ulo uku Chineke: ndi-isi-nchu-àjà-unu bu ndi-ìsì: ha adighi-ahu Chineke, ha adighi-anu kwa olu-Ya.
Mgbe ahụ ọ sịrị, "Amaara m ya." Ihe kachasi mkpa nke Oziọma bụ na Jizọs maara Chineke, na-ekwupụtakwa aha Nna na ịhụnanya Ya. Onye Nazaret enweghị mmehie, ya na Nna ya na-adị n'udo. Ebe ndi mmadu nile kewapu onwe ha site n'onye nso n'ihi nmehie ha.
Mgbe ụfọdụ ndị na-anụ ya ghọtara mkpa okwu ya dị na ya nakwa na Jizọs kpebiri ha ikpe n'ụzọ ziri ezi, ha tiri mkpu, "O kwuluwo megide ụlọ nsọ ahụ ma mee ka anyị ghọọ ndị na-ekweghị ekwe." Ha were iwe na mkpu ákwá na-anwa ijide ya, ma ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ịbịakwute Ọkpara Chineke, dị ka à ga-asị na ndị mmụọ ozi gbara ya gburugburu. Oge a kara aka maka àmà ikpeazụ ya n'elu ụwa ka ga-abịa. Nna ya edoziwo oge nzọpụta nke Kraist ga-agbapụta ihe a kpọrọ mmadụ. Ọ dịghị onye ọ bụla nọ n'ụwa nwere ike ịkwụghachi ma ọ bụ zipu oge ahụ.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-efe gị, n'ihi nà ị maara Chineke, ma kpugheere anyị Nna ahụ. Anyị na-ejere gị ozi wee hụ gị n'anya na ọṅụ. Nkpughe gị mere ka anyị bụrụ ụmụ nke Chineke. Anyị na-enwe aṅụrị n'ime gị ma na-ebuli aha gị elu na ndị niile a mụrụ ọzọ. Anyị na-arịọ gị ka ị kpughee Nna anyị na ndị nwere obi abụọ gburugburu anyị, ka ha wee laghachi na nnukwu ihe na nleghara anya ha.
Gịnị mere Jizọs ji bụrụ naanị onye maara Chineke n'ezie?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)